Alisekho igciwane e-New Zealand | Scrolla Izindaba
Alisekho igciwane e-New Zealand
UNdunankulu wase-New Zealand uJacinda Ardern umemezele ukuthi izwe lakhe selikhululekile ngoba igciwane le-Covid-19 alisekho.
UArdern uthe “wenze umdanso omncane” ngenkathi etshelwa ukuthi laba abakade benegciwane ezweni lakhe bonke sebeluleme.
Imikhawulo eqinile ebibekiwe ye-Covid-19 e-New Zealand izokwehliswa ngoMsombuluko ebusuku, kodwa imingcele isazoqhubeka ivalwe.
Izwe lase-New Zealand liqhelile kwamanye amazwe futhi linabantu abambalwa, ngakho-ke liyindawo engcono kakhulu kunamanye amazwe ukulwa nalolu bhubhane. Kanti futhi uhulumeni ubhekane nale nkinga yalolu bhubhane ngendlela engcono kakhulu kunabaningi. Ubesebenza kahle futhi ekhulumisana kahle nabo bonke abantu.